Labo abenza imisebenzi ebhizinisi, ngokuvamile kunezimo ngenxa ofuna ukushintsha noma ukukhansela inkontileka. Kule ndawo, kukhona izici ezithile kanye nemithetho ukuthi opharetha kwezomnotho kudingeka agcine ngokucacile. I Civil Code sihlinzekela isimiso ngokubulawa okuphoqelekile okwenziwa ezikhungweni zonke izinto yesivumelwano zamazwe amabili.
Ukuguqulwa kanye nokususwa inkontileka kukhona imibono ehlukene. Eyokuqala yinqubo lapho ubuqiniso zomthetho yesivumelwano iyagcinwa, kodwa wasungula izinguquko ezithile noma ukucaciseleka amaphuzu athile. Futhi ngaphansi ekunqanyulweni libhekisela ekunqanyulweni yezihloko ubudlelwane ngaphambi kosuku isethwe ku inkontileka. Kungaba kwenziwe ezimbili kanye unilaterally. Ngaphansi komthetho wamanje, ekunqanyulweni kuphela ukwamukelwa mutual. Nokho, inhlangano angafaka isicelo enkantolo ukwephulwa kwamalungelo noma ukunganakwa, ukuthi ikuvumela ukuba sephule inkontileka futhi imenze okubhekene counterparty.
Ekusebenteni, ngokuvamile i- oda uqobo esiphethweni, ukuguqulwa kanye nokususwa inkontileka. Omunye inganqamula isivumelwano ngaphandle kwemvume omunye kuphela khona ngezizathu ezishiwo umthetho. Ngaphezu kwalokho, njengoba isizathu esikhulu zingaba ushintsho lobuKhristu izimo. Ngaphansi abalulekile kusho ukwephulwa lento ezivumelwano, elibangela lesi ukulahlekelwa cash semali nozakwenu noma ezinye ukungakhululeki abalulekile. Lezi zimo ngendlela emangalisayo yokuma inkampani, ngakhoke ngokuthi kubalulekile. Uma ochwepheshe kungaba ngesikhathi esifanele kwenzeke ngenxa, kanye nesivumelwano akanayo ukuze lisayinwe.
Futhi ngaphansi kwalezi zimo ungakwazi empeleni agcwalise isibopho sawo elicacisiwe inkontileka, kodwa umsebenzi ihlukile okuhleliwe. Ngakho, uqobo isivumelwano kuyize, ngoba noma ibuphi ubuhlobo kufanele kube ngokulinganayo kuyazuzisa la maqembu amabili. Ukuguqulwa kanye nokususwa inkontileka isetshenziselwa ulungise lesi simo. Kusolwa ukuthi ngemuva kokushintshwa ezinye izinto ngenxa isivumelwano ekugcineni kuyoba nemiphumela emihle bonke labo abathintekayo.
Uma abalingani akakwazi ukukufinyelela ukusilela, omunye amaqembu unelungelo ukushintsha isivumelwano ngaphansi kokucindezelwa ngokuhlwaya emithombolwazini enkantolo efanele. Iziphathimandla basafunda ngokuningiliziwe inkontileka ekhona ukuze kutholakale izizathu kungenzeka ukwenza ushintsho futhi ukuqedwa kwenkontileka. Ngakho, isivumelwano kufanele ukwanelisa kwale mibandela elandelayo:
Nge ukusayina kwakhe iqhaza kule kuthengiselana akazange ukuhlela ukwenza noma yiziphi izinguquko. Okungukuthi, isivumelwano iyawakha isikhathi ezithile isikhathi ekuqaleni yahlelwa ngendlela efana ukwenza inzuzo.
Kukhona izimo ukuba ngingehlelwa nangeyodwa kulezi amaqembu ikontraga ababengazange bazicabange nalabo akubalwa lapho kunakwe izinga lobungozi.
Ngaphezu kwalokho ekugcwalisekeni ngokungathandabuzi lwezinto izivumelwano inflicted umonakalo ezinzima ukuze bonke ababambe iqhaza isivumelwano, futhi ngenxa yalokho, kuyinto engeke asebenze. Umonakalo ezingaba ukalwe njengoba ukulahlekelwa okukhulu inkampani.
Isiphetho, isichibiyelo uphelela yesivumelwano - inqubo has a oda ezithile kanye nokukhiqiza ngokuvumelana nemithetho ethile kuphela. kakhulu Iqiniso lokuthi kwemvume ukushintsha izinto ezithile noma ukuqedwa kwenkontileka kumele kwenziwe ngo ngendlela inkontileka. Endabeni ukungawi omunye amaqembu oludinga kuthathwe isinqumo senkantolo.
Exchange of passport iminyaka engu-20
Ubani ohlala Russian Federation?
Ezinye izici abolekise ohlelweni Webmoney